The Life Good ari pano! — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Charlene I'maCharity Hamilton • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:45 ndiri • pindura
Chimwe chinhu Trip, Une pfungwa sei kumedura kupinda biz, Ndinofarira kuimba Ishe uye vakaramba aida kushandiswa nenzira yesimba kugoverana vhangeri kuburikidza mumhanzi yangu. asi, kana kwete ndicho basa rangu Ndinonzwisisa nokuti ndinoda kugara mukati zvakakwana MWARI haana zvangu! Mwari komborera! :D
Mikeyla Victoria Arellano • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:46 ndiri • pindura
Sei makagona zvose zvawakaita uri muduku uye nokuchengeta kutenda?
Zvinoita sokuti kwose kwose kwaunoenda mazuva ano pane mumwe munhu achiti haugoni kuita sonething kana uri havagutsikani kuzviita.
sei Unopinda kare ose okushora uye kuita sezvo yaizivikanwa Christian Rapper munyika mimhanzi tinoziva nhasi?
Charlene I'maCharity Hamilton • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:46 ndiri • pindura
Ndinoda chaizvo this album Ndinokutendai nokuita nziyo kuti mbiri ishe, uye zvinonakidza kuteerera nokuti uduku. Ndiri amai vasina 4 mazera 16, 14, 11, uye 4! I mimhanzi yako pamwe nemamwe Artist siyana achitarisira kuti achandibatsira kugoverana vhangeri nevana vangu uye kuvaratidza kuti kuva muteveri waKristu haisi hakunakidzi lolz uye kwete vanhu vakwegura vanoponeswa. Kwete achiti Ndiri wekare, Ndichiri kufunga pachangu vaduku uye vanoda kuteerera hip, uye Neo mweya. vamupfira,kungoda mazvita kubvumira Mwari kushandisa iwe uye tarenda renyu kuti Ropafadzai uye nevanhu vakawanda kudaro vemazera ose nemadzinza. Mwari komborera
Daniel • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:46 ndiri • pindura
Rumbidzai Jehovha BRO, Ndiri kungoda kumisa parutivi peji rako uye mazano kuti zvose Kuita wenyu nokuda kukudzwa uye kubwinya kwedu Muponesi Jesuchrist!!! BRO muna Jesu zita ndinoparidza zvikomborero iwe, mhuri yako mumhanzi iri yakaisvonaka chaizvo fomu kuratidza rudo zvose nesimba Jesu kuti, tsitsi, simba, nezvaakaitira kwatiri. Stay kumusoro, Kutenda uye Hey…pamwe tinogona kuita njanji chete chikonzero ndadudzira kunotsvaka chipo changu umo Jesu akapa kwandiri; Mwari komborera, ameni.
Mikeyla Victoria Arellano • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:47 ndiri • pindura
Ndinofarira zvose mumhanzi wenyu Trip.
Humdaddy • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:47 ndiri • pindura
Ndinokutendai zvikuru nokuda kwenyu nesimba pamusoro Album ichi. Lyrically, iri kurudziro huru yakadai uye ndichinyengetera kuti album kuchasvika nzeve uye mwoyo zhinji! Kunyengeterera nemiwo, Ndinoziva basa renyu rave chikomborero muupenyu hwangu!
Jannett • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:47 ndiri • pindura
Ndinorangarira sezvo mbudzana achinyengetera kuti Rap Artist yechiKristu kuitira kuti ndaifanira mumhanzi kuteerera. Hazvisi Kazhinji zvandinonzwa vhangeri sezvo kungogumira zvinhu Mwari anogona kukupa kana kuti kana usina zvinhu zviri chikonzero chakanaka uchiri Kristu. ushumiri hwako hwave kurudziro chaiyo uye ndinoda dingindira Album yako. Kukunyengetererai
Ed McCrae • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:47 ndiri • pindura
Album ndiye mabhanana BRO! Your zvakanakisisa asi.